​सिभिल होम्सको ठगिः समुदायलाई दिनुपर्ने जग्गा कम्पनीको भनेर बिक्री
२० माघ २०७३
न्यूजसेवा काठमाडौं । आफूलाई नेपालको प्रमुख हाउजिङ कम्पनी दावी गर्ने सिभिल होम्स प्रा.लि.ले उपभोक्ता ठग्ने गरेको अर्को रहस्य खुलासा भएको छ । एक घरबापत क्षेत्रफलअनुसार १ करोड देखि ३ करोड रुपैयाँसम्म उठाएरको कम्पनीले प्रतिबद्धता गरेअनुसार कुनै पनि सेवा दिएको छैन । सिभिल होम्सले आफ्नो विशेष परियोजना भनेर प्रचार गर्ने ललितपुरको सुनाकोठीस्थित सिभिल होम्स तेस्रो फेजमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको भेटिएको छ । सुनाकोठीमा घर खरिद गरी…विस्तृत समाचार »
डिआइजी नवराज सिलवाललको ‘मिटर ब्याज’ कहानी (गोप्य अडियोसहित )
• न्यूजसेवा काठमाडौं । हाल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) प्रमुख रहेका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) नबराज सिलवाल र चितवनको भण्डारा गाविस घर भएका जग्गा व्यवसायी सम्भु थापा भनिने गुनबहादुर थापाबीचको लेनदेन बिवाद अहिले पनि चर्चित छ । सिलवालसँग ऋण लिएका गुनबहादुर अहिले बैंकिङ कसुर मुद्दा अन्तर्गत र्पुक्षका लागि मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी कारागारमा थुनामा छन् । यता डिआइजी नवराज सिलवाल भने नेपाल प्रहरीको नयाँ…विस्तृत समाचार »
स्ववियु चुनाव : कुन संगठनको कस्तो तयारी ?
एलिजा उप्रेती १९ माघ, काठमाडौं । लामो समयसम्म हुन नसकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को चुनाव हुने मिति तय भएसँगै विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएका विद्यार्थी नेताहरुमा एक प्रकारको उल्लासको वातावरण देखिएको छ । विभिन्न क्याम्पसहरुमा अहिले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावी सरगर्मी शुरु भइसकेको छ । कलेजहरुमा विद्यार्थीरुले आफु आवद्ध संगठनलाई चुनाव जिताउनै खुलेरै प्रचार गर्न थालेका छन् । यद्यपी अघिल्ला चुनावमा जस्तो यसपाली प्रचारप्रसारका नाममा हुने…विस्तृत समाचार »
माओवादीमा मातृका यादव र मणि थापा समुहबिच चर्काचर्की ! हलभित्रै मणि थापा मुर्दावादको नारा
१९,माघ,काठमाडौं । विभिन्न माओवादी समुह मिलेर बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रमा लफडै–लफडा छ । विभिन्न समुहबाट माओवादी केन्द्रमा आएका माओवादी समुहका नेता र गुटको असरले माओवादी भातृ संगठन समेत चौपट हुने अवस्थामा छ । त्यसै त २ हजार वढीको केन्द्रिय समिति रहेको माओवादीमा नेताहरुको गुटबन्दीले झन समस्या थपिएको छ । खासगरि एकता प्रक्रियामा आएका मातृका यादव र मणि थापाको विवादले यतिबेला माओवादी केन्द्रमा खलबली नै मच्चिएको छ…विस्तृत समाचार »
माघ १९ : आजकै दिन ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याउदै यसरी गरेका थिए ‘कू’
माघ १९, २०६१ को शाही कदमको बीजारोपण २०५९ असोज १८ अघि नै भएको हो । तर, सुरुमा त्यत्रो कठोर कदम चाल्ने योजना थिएन । यद्यपि, तत्कालीन परिस्थितिको समग्र मूल्यांकनका आधारमा केही न केही कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता दरबारले महसुस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटनको सिफारिस गर्नुभन्दा अगाडि नै यस्तो महसुस भएको थियो । संसद् विघटन राजाले गरेको भन्ने हल्ला भयो, जबकि त्यसको…विस्तृत समाचार »
उपेन्द्र यादव र युवतीको फोन कलबारे खैलाबैला ! को थिइन ति युवती ?
१९,माघ,काठमाडौं । चारवटै मोबाइल स्विच अफ गरी उपेन्द्र यादव कुनातिर पसेपछि मधेसी मोर्चामा खैलाबैला मच्चियो । केन्द्रीय नेता, अंगरक्षक, ड्राइभर कसैसंग सम्पर्कमा नरहेका यादवको अस्ति १५ गते ल्होछारको दिन एउटी महिलासंग सम्पर्क गरेको १० मिनेटपछि मात्र मोबाइल अन भयो। अनि बल्ल मोर्चाको निर्णय सार्वजनिक हुन सक्यो। मधेसी मोर्चाको बैठक तमलोपा पार्टी कार्यालय बबरमहलमा १४ र १५ माघमा बसेको थियो। १४ गते त उपेन्द्रको उपस्थिति थियो।…विस्तृत समाचार »
चुनावको नाम जोडेर हामीलाई लोकतन्त्रको पाठ नसिकाए हुन्छ : महतो
१८ माघ,काठमाडौँ । सरकारसँग सम्बन्धविच्छेदको धम्की दिदै आएको मधेशी मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले सरकारले जुनसुकै हालतमा पनि संविधान संसोधन गर्नुपर्ने अडान राख्छन् । तर यता सरकारमा सामेल दलसहित विपक्षी एमाले भने चुनावकै रटानमा छन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेता राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन नगरीकन चुनावको मिति घोषणा गरे सरकारसँगको सम्बन्धविच्छेद गर्ने र त्यसको विरुद्धमा शसक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिन्छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले…विस्तृत समाचार »
​साना दललाई चुनावी झड्का,तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न शीर्षदल सहमत
१८ माघ, काठमाडौं । लामो समयदेखि समानुपाति निर्वाचन प्रणालीमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने की नराख्ने भन्ने कुरा चलिरहदै आएकोमा अब करिब करिब प्रमुख दलहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने सहमतिको नजिक पुगेका छन् । आजै यसलाई राज्य व्यवस्था समितिले संसद बैठकमा पठाउने तयारीय भइरहको भनिएको छ । यद्यपि अनौपचारिक सहमति भने तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न मन्जुर भएका छन् । साना दलले थ्रेस होल्डको…विस्तृत समाचार »
​यसकारण ‘असफल प्रधानमन्त्री’ हुँदैछन् प्रचण्ड
• प्रशान्त ओझा अघिल्लो आइतबार (माघ ९ गते) राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ १५ गते (शनिबार)सम्म स्थानिय चुनावको मिति घोषणा गरी सक्ने घोषणा गरेका थिए । हुनत दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेदेखि उनले गर्ने धेरै घोषणाहरु ‘घोषणा’मै सीमित भएका छन् । तर, चुनावको मिति घोषणा गर्ने विषयमा गरिएको दावीले केही सकरात्मक आशाहरु पलाएका थिए । तर, अब त्यो आशा पनि निराशामा परिणत…विस्तृत समाचार »
​ प्रधानमन्त्रीका तीन प्रश्न, मोर्चाको तीन उत्तर
१८ माघ, काठमाडौं । १. निर्वाचनको तयारी गर्दा के हुन्छ ? संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउँदै निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तह चुनावको तयारी गर्न भन्यो भने के हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चाका नेताहरूसँग जिज्ञासा राखेका थिए । विधेयक पारित गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्‍यो भने मान्नुहुन्छ कि हुन्न प्रस्ट पार्न उनको आग्रह थियो । विधेयकलाई मतदानमा लैजाँदा आउने नतिजा सहर्ष स्वीकार गर्ने कि नगर्ने जानकारी गराउन…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 943 944 945 946 947 Older Last ›